Agaasimihii guud ee Wasaaradda Caafimaadka oo xabsiga loo taxaabay - Tilmaan Media
Agaasimihii guud ee Wasaaradda Caafimaadka oo xabsiga loo taxaabay
Wararka naga soo gaaraya Xarunta Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xafiiskiisa lagala baxay agaasimihii guud ee Wasaaradda Caafimaadka.
Agaasimahaan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xaashi ayaa waxaa xafiiskiisa ka watay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Ilaa hadda si rasmi ah loo ogo sababta keentay xarigiisa, inkastoo ay jiraan warar aan la hubin oo sheegaya inuu daba socdo xarigii loo geystay agaasimihii maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka oo lagu eedeeyey musuq maasuq.
Habeen ka hor ayey aheyd markii Ciidamada Dowladda ay guriigiisa kala baxeyn Agaasimihii Waaxda Maaliyadda ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buulle, sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Agaasimaha la xiray ayaa lagu soo eedeeyey kiis musuq-maasuq oo lacag badan lagu lunsaday, sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska hanti-dhowrka iyo kan ra’iisul wasaare Kheyre, oo codsaday inaan la magacaabin.
Isha Warka: Caasimada Online
SOMALIA AND SOCIAL DISTANCING: HELPING THE INDIGENT TO MITIGATING COVID-19. By Faisal Roble
Deyn cafinta Soomaaliya Guul u baahan in loo dabaaldego.